ပထမဦးဆုံးအဧပြီလမိခင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သူ Chloe Kardashian, မိမိအပရိတ်သတ်တွေတစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာစီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံးစနေနေ့ cutie နည်း, Tru အသက်တလတိုတောင်းတဲ့ဗီဒီယိုမှာအများပြည်သူ telediva အစအနမိတ်ဆက်ပေးသည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က, 33 နှစ်အရွယ် Chloe Kardashian plaid ၏အကူအညီနှင့်အတူ paparazzi ကနေပုန်းရှောင်နေတဲ့ဘီးတပ်ကုလားထိုင်၌ရှိ၏သူတစ်ဦးမွေးကင်းစသမီးနှင့်အတူအများပြည်သူအရပ်ဌာန၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ထင်ရှား။ ,
ပဌမနေ့ Chloe ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားထရစ်စ Thompson ကသူ, သမီး၏အချိန်ဇယားအနည်းငယ်ကိုရှေ့ဆက်ဖို့မွေးဖွားပေးသောသေးငယ်တဲ့မှန်ကလေးမွေးဖွားလူမှုကွန်ရက်များ၏ပွဲဦးထွက်ဆင်နွှဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
သမီးနှင့်အတူ Chloe Kardashian
Instagram ကိုနှင့် Snapchat Kardashn မှာစနေနေ့နံနက်တွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာပြသပေးသောကောင်းတဲ့ဗီဒီယို, ထင်ရှား။ ,
Kardashian ၏ publication (@kardashianscenes)
ကိုယ်ဝန်အလွန်ကြိုဆိုသောအရာများအတွက် roller ဂုဏ်ယူမိဘ, မှမှတ်ချက်များအတွက်သူ wrote:
"ကျွန်မပျော်ရွှင် mom, တစ်လပေါ့။ ငါသည်သင်တို့ကို, ကလေးကိုချစ်! "
ဂုဏ်အသရေအဖြစ်မှန်တီဗီကြယ်ပွင့်မှာတော့သူမ၏ပါးပန်းပွင့် adorning တစ်ဦးဆီးနှင်းဖြူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကင်မရာမှာရှာဖွေနေအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူဗီဒီယိုထဲမှာသူဝတ်ဆင်သမီး, ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်၏ထုတ်ဝေပြီးနောက်နာရီအနည်းငယ်အကြိုက်နဲ့ချီးမွမ်းနည်း, Tru နှင့်သူမ၏ချစ်စရာကောင်းတင်းတိပ်သန်းပေါင်းများစွာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အပြင်မိန်းကလေးငယ်များဆွေးနွေးခြင်း, အင်တာနက်သုံးသူတွေရဲ့စစ်မှန်သောကြည့်, သူတို့ကသူမ၏ဖခင်တစ်ဦးထရစ်စ Thompson ကကြောင်းသံသယမရှိပါဘူး, ထိုကောက်။ ငါ့အဖေမှပြီးသားအလွန်ဆင်တူထိုကဲ့သို့သောနူးညံ့သောအသက်, ရှိနေသော်လည်း Schekastenkaya ကလေး။
ထရစ်စ Thompson နှင့်စစ်မှန်သော
Chloe Kardashian မိမိသမီး၏နေ့စွဲမွေးဖွားရောထွေး
Chloe Kardashian သူမ၏သမီးနှင့်အတူအများပြည်သူအရပ်ဌာန၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ပေါ်ထွန်းသော
Chloe Kardashian သည်သူ၏ဖောက်ပြန်နှင့်အတူတတန်းပြီးနောက်ထရစ်စ Thompson ကပစ်ချင်ပါဘူး
စကားမစပ်, Chloe, သူ့မိသားစုများ၏မကျေနပ်မှုရှိနေသော်လည်းခွန်အားသူ့ကိုကောင်းတစ်ဦးဖခင်နှင့်ခင်ပွန်းဖြစ်မယ့်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းအားဖြင့်ထရစ်စမသင့်လျော်အပြုအမူခှငျ့လှတျဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထရစ်စ Thompson နှင့် Chloe Kardashian
ပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်အတူထွန်းလင်း: ကိုယ်ဝန်ဆောင် Kirsten Dunst ကြီးထွားလာဝမ်းနှင့်တစ်ဦး dreamy အပြုံးဖုံးကွယ်မထားဘူး
George Clooney နိုးကွားလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆုအခမ်းအနား Award ဆုရှင်များအတွက် Aurora Prize ကိုတက်ရောက်ရန်လိမ့်မယ်
မင်းသမီး Halle Berry နဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ဓာတ်ပုံကို3နှစ်အရွယ်သားကျေနပ် subscriber များအားရှိပါတယ်
Bryan Tanaka နှင့်ရိုင်ယာကယ်ရီအတူတူပြန်ကြသည်
Tom Cruise နဲ့ရဲ့အမေသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ
မှ Ian McKellen ရှန်ဟိုင်းအတွက်အိမ်ထောင်ဖက်ရှာဖွေနေသည်
အက်ရှလေဂရေဟမ်တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်နဲ့ "ရိုးရိုးသားသား" ဓာတ်ပုံà la ", Baywatch" သူတို့ပရိတ်သတ်တွေအံ့အားသင့်
Rihanna ရဲ့ဖခင်ဘယ်လောက်ဆံပင် Kanye West ကပြောကြားခဲ့သည်
Olga Kurylenko သူ၏ဖခင်ကလေးတစ်ဦးပရိသတ်ကိုပြသ
Candice Swanepoel နဲ့ Hermann Nicoli သား၏ပထမဦးဆုံးဓါတ်ပုံ shared
ကြော်ငြာ - သားသမီးများ၏စိတ်ထဲတွင်အပေါ်သက်ရောက်မှု
Columnar သစ်တော်သီး - တန်း
တေလာဆွစ်ဖ်အရှိဆုံးငွေရေးကြေးရေး-အောင်မြင်သောအဆိုတော် Forbes မဂ္ဂဇင်းမှဖြစ်ပါသည်
ပုံမှန်မဟုတ်သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ sibling: "တိုက်ရိုက်" ကစားစရာတစ်ခုမျိုးဆက်သစ်!
Multivarka အတွက် Cheesecakes
သစ်တော်သီး - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
Sandra Bullock သည်သူ၏မွေးစားသမီး Laila ပြသ
တစ်ရေကြောင်းစတိုင် 2013 ခုနှစ်တွင်စားဆင်ယင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင် Irina Shayk အနက်ရောင် caviar နှင့်အတူ oladushek ချင်